စပိန်အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေကာစီနိုအပိုဆု - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
စပိန်ကနေလောင်းကစားဝိုင်းကလပ်ကစားသမားသူတို့ရဲ့သရုပ်ဖော်ပုံများများအတွက် ပို. ပို. ထင်ရှားသောတက်အကွေ့အကောက်များသောနေကြသည်ဝန်ခံကြောင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံထိရောက်သောစောင့်ရှောက်ငွေကြေးနှင့်ပရိုမိုးရှင်း။ စပိန်တွင်နေထိုင်သောနှင့်ကလပ်အတွက်ရင်ဖွင့ရှာနေတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီကစားသမားများအတွက်ကျနော်တို့အားလုံးကိုအကောင်းဆုံးစပိန်လောင်းကစားဝိုင်းကလပ်တစ်ခုရွေးချယ်မှုရာ၌ခန့်ထားပြီ! programming ကိုပေးသွင်း၏ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားနံပါတ်များသို့သော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စပိန်ကလပ်ပြပွဲအောက်ပါ, သင်ရုံကိုအကောင်းဆုံးစပိန် programming ကိုပေးသည်အသုံးချဖို့့ကိုအကောင်းဆုံးစပိန်အွန်လိုင်းလောင်းကစားကလပ် join မည်ဟုစပိန်လောင်းကစားဝိုင်းကလပ်ကစားသမားများအတွက်အရှင်မြောက်မြားစွာ clubhouse ရှိပါတယ်။ သူများသည်အများဆုံးတရားဝင်အွန်လိုင်းစပိ clubhouse နေ့တိုင်းသို့ကြည့်ရှုနှင့်ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောမခံရမီကြိုးစားခဲ့အမြန်အရစ်ကျနှင့်အောင်လက်မှတ်ကျွမ်းကျင် client ကိုအကျိုးအတွက်အားလုံးနေ့အဘို့။ သူတို့ရဲ့လောင်းကစားကလပ်တှေ့ဆုံစပိန်ကနေ clubhouse ကစားသမားမှမှီခိုကိုက်ညီ။
အဆိုပါအားလုံးလောင်းကစားဝိုင်းကလပ်ကစားသမား ES အသိအမှတျပွုကွောငျးကို web clubhouse အပေါ်ပူးတွဲ, အလေးအနက်ထားကလပ်များတွင်ခိုလှုံသူတွေကိုတွင်အွန်လိုင်းအဖွင့်စက်တွေသို့မဟုတ်စားပွဲနှင့်ကဒ်အပန်းဖြေသိုလှောင်နှင့်ဆော့ကစားရန်အစပိန်နေသောကစားသမားခွင့်ပြုသည်။ ဤတွင်, သင်အခွင့်ထူးအွန်လိုင်းစပိန်လောင်းကစားဝိုင်းကလပ်ရှာဖွေတာအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုအခမဲ့ပရီမီယံအုပ်ချုပ်ရေး၏ဌန်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။
အကောင်းဆုံးနှင့်အစိုင်အခဲတနေ့လုံး, နေ့တိုင်း client ကိုဒေသခံစပိန်စပီကာများကအားကောင်း
ပိုများသောသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း, စပိနျကာစီနိုအားကိုးတီထွင်မှုဖွငျ့နှင့်လောင်စာ programming ကိုအသုံးချသင်အွန်လိုင်းမှကလပ်အတွက်လိုအပ်နိုင်သမျှသောသူတို့ကိုပေးတော်မူ၏။
တစ်ဦးကစပိန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလပ် clients များတစ်ဦးပထမဦးဆုံးအချိန်စတိုးဆိုင်ဆုလာဘ်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြင့်၎င်း၏အွန်လိုင်းပြိုင်ဘက် '' Playbook ကနေစာမျက်နှာဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Grupo Ballesteros ကအားလုံးကိုပိုမိုယေဘုယျအား Toledo, စပိန်၌, ကာစီနိုက de Illescas အဖြစ်လူသိများသည့် Gran ကာစီနိုက de La Mancha ပြည်၌ရှိသမျှသောတစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်ကမ်းလှမ်းမှုကို, ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းတစ်ပါတ်အကြာကြေညာခဲ့ပါတယ်။
Ballesteros လူနည်းစုထုတ်ဝယ်ယူရန်ဖို့ရွေးချယ်သို့သော်နှောင်းပိုင်းက၏အဖြစ်, ထိုအချက်မှာကျောအနိုင်နိုင်တစ်နှစ်က၎င်း၏ဗိမာန်ဖွင့်လှစ်သောသုံးထပ်ကလပ်အတွက် သာ. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခဲ့ Juan ဟိုဆေး Sanchez Colilla နှင့်တရုတ်အမျိုးသားရေး Zhou Ye Haiguan accomplices ။
ချီးမွမ်းခြင်းကိုရန်, clubhouse မြေယာ-based ဂိမ်းမြင်ကွင်းများထက် web based လောင်းကစားဒေသခံအထူးပိုပြီးမှတ်မိန့်အသတ်အချိန်တစ်မျိုးက၎င်း၏ client များထွက်ချပြီးဖြစ်ပါတယ်။ စပိန်ဂိမ်းသတင်းထွက်ပေါက် Azarplus အတွက်အစီရင်ခံစာနှုန်းအတိုင်း, လောင်းကစားဝိုင်းကလပ်က၎င်း၏ဧည့်သည်ကိုသူတို့နေရာသို့မဟုတ်စားပွဲထူးထူးအထွေထွေရှိငြားကစားနေတာဟုတ်မဟုတ်အနည်းငယ်သာစိတ်ကိုပေးဆောင်, € 20 အထိသူတို့ရဲ့နောက်ခံပိုက်ဆံစတိုးဆိုင်များအပေါ်တစ်ဦး 250% ဆုလာဘ်ရလိမ့်မည်ဟုကတိပေးထားပါသည်။
Grupo Ballesteros စပိန်ခန့်သုံးဒါဇင်ဘင်ဂိုကစားစင်္ကြံအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်ထိုနည်းတူအတူတကွနိုင်ငံ၏သုံးအကြီးမားဆုံးမြေယာ-based ဘင်ဂိုကစားအားဖြင့်အပြေးထားရှိမည်သော, အွန်လိုင်းဘင်ဂိုကစား run နှင့် eBingo.es အားဖွငျ့စပိန်ရဲ့ထိန်းချုပ် web based လောင်းကစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍပစ္စည်းများ clubhouse မှလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ: Grupo Ballesteros, Grupo Coves နှင့်ဘင်ဂိုကစား Reunidos ။
အွန်လိုင်းဆုလာဘ်သုံးခုဘင်ဂိုကစားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ '' ပိုင်နက်ကိုအခြေခံပြီး setting များကိုမဆိုမှာအခိုင်အမာရနိုင်အဖြစ်ယခု၏အဖြစ် eBingo က်ဘ်ဆိုက်, Omni-ရုပ်သံလိုင်း၏အမြင်ရှိပါတယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, Grupo Ballesteros ထိုနည်းတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂိမ်းကမ်ဘာပျေါတှငျအနာဂတ်ရှိစေခြင်းငှါအချို့ထုံးစံအွန်လိုင်း-ရုံအစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်ရွေးကောက်တော်မူခဲ့သည်။
၎င်း၏စပိန်လှုပ်ရှားမှုများသို့ရာတွင် Grupo Ballasteros ထိုနည်းတူအဖွဲ့အစည်းအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရှည်များအတွက်နီးရှိခဲ့ပါတယ်ရှိရာဗင်နီဇွဲလားအတွက်အဖွင့်နှင့်ဘင်ဂိုကစားတာဝန်များကိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
စပိန်နိုင်ငံတွင်လောင်းကစားကလပ် 1977 သည်အထိအပ်မရှိကြ၏။ ကြောင်းခြင်းမပြုမီရုံအခြေခံ State-run ထီခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ စပိန်ကလပ်၏ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကတည်းကသူတို့အလွန်ကျော်ကြားဖြစ်ထွက်လှည့်ပါပြီ။ ယနေ့တွင် 60 ကျယ်ပြန့်စကေးလောင်းကစားဝိုင်းကလပ်အသင်းထက်ပိုသောလူမြိုးဟိုမှာဖြစ်ကြသည်။ စပိန်ရဲ့လောင်းကစားဝိုင်းကလပ်၏တစ်ဦးကစုံတွဲသို့သော်အများဆုံးပုဂ္ဂလိကဖြစ်ကြောင်း, နိုင်ငံတော်ကအခိုင်အမာရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်များဧရိယာမှခရိုင်ကနေ shift, သေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုအပေါ်တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းစရိတ်အပြင်, စုစုပေါင်းဝင်ငွေပေါ် 55% ၏ပုံမှန်သွားပါ။ ထို့ကြောင့်, စပိန်ကလပ်၏ 66 န်းကျင်% ကိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းမဆိုလမ်းပိုင်းအားဖြင့်ထွက်ခွာသွားခြင်းမရှိအကဲဖြတ်ရန်အကြိုးခံစားခှငျ့ရှိသညျ။
2012 အတွက်စပိန်တရားဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ကိုင်ဖို့တရားခွင့်အွန်လိုင်း clubhouse ခွင့်ပြုသဖြင့်နောက်ထပ်ပြိုင်ဆိုင်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်ကွင်းတစ်ခုထိုနည်းတူအမေရိကန်ထင်ကြေး Sheldon ဒယ်လ်ဆန်၏ Eurovegas လို့ခေါ်တဲ့စူပါအပန်းဖြေလီဆယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားသည့်အခါတစ်ဦးကြီးမားတဲ့ shakeup တွေ့ကြုံခံစားမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ က may ကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်း, လောင်းကစားဝိုင်းကလပ်ငွေကြေးထောက်ပံ့အကဲဖြတ်ကျော်ရပ်ကွက်အတွင်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူတစ်ပဋိပက္ခနှင့် clubhouse အတွက်ဆေးလိပ်သောက်သပိတ်မှောက်ပြီးနောက်ဒီဇင်ဘာလ 2013 ၌သူ၏ဒီဇိုင်းများကျဆင်းသွားသည်။
ဥပဒေ 13 / 2011 လောင်းကစားအပေါ်တရားဇွန်လ 2012 ကနေစပိန်အတွက်အခွင့်အာဏာကိုတက်အဆုံးသတ်အွန်လိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများဖို့လမ်းဖွင့်လှစ်ခဲ့။ အတော်များများကအဖွဲ့အစည်းများလက်ရှိတွင်ကို virtual မြင်ကွင်းတစ်ဦးစံအစိတ်အပိုင်းတွေဟာအရာတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအစက်အပြောက် es ၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဦးတည်းအွန်လိုင်း clubhouse, စေလွှတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းဆှဲပွီ။
ဇူလိုင်လ 2014, စပိနျကို web clubhouse သည်အထိရုံနေရာများကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်သို့သော်ကစားတဲ့, ဖဲချပ်ဝေ, ဘင်ဂိုကစား, Blackjack နှင့် Baccarat ပူဇော်ဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ က may အဖြစ် Be ယခုစပိန်အစိုးရသစ်ကိုလမ်းညွန်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်တရားဝင်အင်တာနက်လောင်းကစားအုပ်ချုပ်ရေး၏ rundown အပေါ်အာကာသအပန်းဖြေနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအာမခံထည့်သွင်းထားသည်။ စပိန်မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
အဆိုပါစပိန်စီမံခန့်ခွဲခြင်းခန္ဓာကိုယ် - Direcciónအထွေထွေက de Ordenación del Juego - အခုပါမစ် applications များနှင့်တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းရတဲ့ဇန်နဝါရီလ 1, 2015 အားဖြင့်တိုက်ရိုက်သွားကျောင်းအုပ်ကြီးစပိနျခွင့်အွန်လိုင်းအာကာသအပန်းဖြေအတူတစ်နှစ်ခွဲတစ်နှစ်ဝန်းကျင်ယူအပေါ်သို့မှီခိုဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်မြားစွာစပိန်ကစားသမားသည်ဤလူနေအိမ်နေရာများသို့သွားရောက်ဆိုသော်ငြားအပြည့်အဝ Monty ပူဇော်ကြောင်းပြင်ပတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားကလပ်နေဆဲအလွန်ကောင်းစွာသူတို့တွင်လူသိများကြသည်။
Thunderbolt ကာစီနိုမှာ 170 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
20 BettingWays ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
Adler ကာစီနိုမှာ 20 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
60 ထီပေါက်ကာစီနိုမှာ 77 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
95 အခမဲ့ဘင်ဂိုကစားစိန်ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
130 အခမဲ့ 21 Prive ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
100 Platin ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
Fruity ဘုရင်ကကာစီနိုမှာ 40 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
95 အခမဲ့ Winorama ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
Kolikkopelit ကာစီနိုမှာ 125 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
MainStage ကာစီနိုမှာ 30 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
LesACasino ကာစီနိုမှာ 120 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
90 အခမဲ့ Planet ကို7ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
165 အခမဲ့ Suomi ဂတ်စ်ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
ဘော်ဒိုးကာစီနိုမှာ 45 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
95 ComeOn ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
145 MagicalVegas ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
တောင်ပိုင်းသဲသောင်ပြင်ဘင်ဂိုကစားကာစီနိုမှာ 150 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
75 အခမဲ့ Mega ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
95 အခမဲ့ Llama ဂိမ်းကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
သူဌေးကကာစီနိုမှာ 70 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
140 အခမဲ့ INetBet ယူရိုကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
100 အခမဲ့ Las Vegas မှာကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins